Ọ bụghị ihe ngosi LED n’èzí ka emepụtara. Site na ọtụtụ nhọrọ na atụmatụ dịnụ, ịhọrọ nke kacha daba adaba nwere ike ịbụ ihe ịma aka. LEDfọdụ Ikanam Display manufactures mata mma etoju mgbe ndị ọzọ na-elekwasị anya na-enye ndị kasị mma ọnụ n'èzí Ikanam ngosi.
Kedu nke ị ga-achọ ịga?
Ngosipụta ọnụ ala kachasị dị ala?
Ndị na-emepụta ahịa na-ere onwe ha ọnụahịa naanị bụ ụlọ ọrụ ka ha pụọ. Typesdị ụlọ ọrụ ndị a na-abịa ngwa ngwa. Ndị na-emepụta ihe nwere ngwaahịa dị ọnụ ala na-egbutu ọtụtụ nkuku mgbe ọ bịara n'ụdị ihe dị n'ime ha na-eji maka ngosi ọkụ. Nke a na - eduga na ngwaahịa dị ala dị ọnụ ala. Iji kpuchie ụlọ ọrụ ndị dị ala na-eji usoro ịzụ ahịa mara mma kọwaa ma ree ngwaahịa ha.
Otutu ihe ngosi nke ikanam na onu ahia kacha ala:
Ala nke ihie - sọọsọ 4,000 NITS
O siri ike iji sọftụwia izi ozi - enweghị nkwado & cumbersome
Ogologo oge na-eduga na akụkụ & nkwado
Enweghị ezigbo asambodo - ọ bụghị UL depụtara, cUL Depụtara ma ọ bụ CE edepụtara
Akwụkwọ ikike ọjọọ - nke kacha nta akwụkwọ ikike afọ abụọ
Pixel Sharing or Virtual Resolution - sọftụwia na-azọrọ na ọ ga-eme ka ihe ngosi ngosi gosipụtara ma ogologo oge ga-emepụta ọtụtụ nsogbu na nghọta doro anya na ndụ nke modulu LED.
Gịnị bụ a elu àgwà Ikanam ngosi?
Site na ịkwụwa aka ọtọ na ibute ụzọ banyere ngwaahịa gị azụmaahịa gị ga-eto mgbe niile ma ndị ahịa ga-atụkwasị obi n'ịdịmma gị.
Mgbe ị na-achọ ihe ngosi ọkụ na onye nrụpụta mara mma na-elele mgbe niile iji hụ ma ọ bụrụ na ngosipụta ha bụ:
A na-anwale Okpomọkụ & Ihu Igwe - nkewapụtara maka mwepu -22 ruo ogo ogo 62 pụtara na onye nrụpụta na-eji ọkwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'ezie. Nke a na ọtụtụ afọ nke arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na gburugburu ebe kachasị njọ.
Na-agafe Nnwale Nlere - tupu Ikanam egosiputa ụgbọ mmiri ha kwesịrị ịnwale ma gafee ule na-esonụ: Iguzosi Ike n'Ezi Ihe, Mmalite Nzuzo, Mgbapụta Mbara Igwe, Kwesiri, Mmetụta, Ọkụ, Mmiri, Mmiri, Immunity, na Nlekọta Nchedo Nzuzo.
Ihe Nkwado & Ọzụzụ n'efu - Ọbá akwụkwọ nke vidiyo vidiyo ọzụzụ na-akwadoghị na ọzụzụ ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ.
Manufacturing Quality –manufacturing companies that are ISO 9001: 2008 Asambodo bụ nnukwu akara nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ siri ike. Typedị asambodo a bụ ogo na ogo.
Akwụkwọ ikike - opekata mpe afọ 2. Lọ ọrụ ọ bụla na-ejide akwụkwọ ikike ahụ n'onwe ha ma na-ejighi ụlọ ọrụ mkpuchi nke atọ pụtara na onye nrụpụta kwenyere na ogo ngwaahịa ha rụpụtara.